Indlela yokusebenzisa i-Z.TEST Function kwi-Excel
Indlela yokwenza i-Hypothesis Ivavanya nge-Z.TEST Function kwi-Excel
Iimvavanyo ze-Hypothesis zinye zezihloko eziphambili kwiinkalo ezingenasiphelo. Kukho amanyathelo amaninzi okuqhuba uvavanyo lwengqondo kwaye ezininzi zazo zifuna izibalo zokubala. Iprojekti yesitatisti, njenge-Excel, ingasetyenziselwa ukwenza iimvavanyo ze-hypothesis. Siza kubona indlela umsebenzi we-Excel Z.Iimvavanyo zeemvavanyo ezicinga ngayo malunga nenani labantu abangaziwa.
Imiqathango kunye neengqiqo
Siqala ngokuchaza iingqiqo kunye neemeko zolu hlobo lovavanyo lwengqondo.
Ukuchazwa malunga nenjongo kufuneka sibe nale miqathango elula:
Isampuli yisampula esilula .
Isampuli sincinci kwisayizi esimalunga nabantu . Ngokuqhelekileyo oku kuthetha ukuba ubukhulu besibalo singaphezu kwama-20 ubukhulu besampuli.
Uguquko olufundwayo oluqhelekileyo luhanjiswa.
Ukwahlukana komgangatho wabemi uyaziwa.
Iintetho zentsimi aziwazanga.
Yonke le miqathango ayinakwenzeka ukuba idibene nayo. Nangona kunjalo, le miqathango elula kunye nokuhlolwa kweengcamango ezihambelana namaxesha ngamaxesha kudibana nabo ekuqaleni kweklasi yeenombolo. Emva kokufunda inkqubo yovavanyo lwengqondo, le miqathango ikhululekile ukwenzela ukuba isebenze kwisimo esilungileyo.
Ukwakhiwa kovavanyo lwe-Hypothesis
Uvavanyo oluthile olucingwa ngalo luhlobo olulandelayo:
Buchaza i- null kunye nezinye iingcinga .
Bala i-statistical test, e- z -score.
Bala ixabiso le- p ngokusebenzisa i-distribution evamile. Kule meko ixabiso le-p linako ukufumana okungenani ngokugqithiseleyo njengemigangatho yokuhlolwa kweemvavanyo, ukucinga ukuba i-hypothesis ayilungile.
Thelekisa ixabiso le-p kunye nenqanaba lokubaluleka ukuchonga ukuba ngaba uyalahla okanye uyaphumele ukugatya i-hypothesis engekho.
Siyabona ukuba amanyathelo amabini anesithathu athatyathwa ngokubanzi xa kuthelekiswa amanyathelo amabini kunye nezine. Umsebenzi weZ.TEST uza kusenza ezi zibalo.
Umsebenzi we-Z.TEST wenza zonke izibalo ukusuka kumanyathelo amabini anesithathu angentla.
Yenza uninzi lwenani le-crunching yovavanyo lwethu kwaye ubuyisela ixabiso le-p. Kukho iingxabano ezintathu zokungena kulo msebenzi, ngasinye sichaswa yi-comma. Ezi zilandelayo zichaza ezi zintathu iintlobo zeengxabano zalo msebenzi.
Ingxabano yokuqala yalo msebenzi yinkcazelo yesampuli. Kumele sifake uluhlu lweeseli ezihambelana nendawo yedatha yesampuli kwi-spreadsheet yethu.
Ingxabano yesibini yindleko ye-μ esiyivavanya ngayo kwiingcamango zethu. Ngoko ukuba i-hypothesis yethu engafanelekanga i-H 0 : μ = 5, ngoko siza kufaka i-5 kwingxoxo yesibini.
Ingxabano yesithathu yindleko yokuphambuka komgangatho wabemi owaziwayo. I-Excel iyakwenza oku njengengxabano yokuzikhethela
Amanqaku kunye nezilumkiso
Kukho izinto ezimbalwa eziza kuqatshelwa malunga nalo msebenzi:
Ixabiso le-p eliphuma kumsebenzi linye linye. Ukuba siqhuba uvavanyo lwesibini, ke le xabiso kufuneka liphindwe kabini.
Isiphumo esisisigxina se-p-value evela kumsebenzi sithatha ukuba isampulu lithetha ukuba likhulu kunexabiso le-μ esivavanyayo. Ukuba isampuli ithetha ngaphantsi kwexabiso lempikiswano yesibini, ngoko kufuneka sikhuphe umkhiqizo womsebenzi ukususela kwi-1 ukufumana ixabiso le-p kweli yovavanyo lwethu.
Ingxabano yokugqibela yokuphambuka komgangatho wabemi iyakhethwa. Ukuba oku kungenisiwe, ke eli xabiso litshintshwa ngokuzenzekelayo kwiibalo ze-Excel ngolu hlobo lwesampula ukuphambuka. Xa oku kuyenziwe, uvavanyo oluthile lufanele lusetyenziswe endaweni yoko.
Siyicinga ukuba le data ilandelayo ivela kwisampula esilula esicatshungulwayo sabantu abaqhelekileyo abasasazwayo kunye nokuphambuka okuqhelekileyo kwe-3:
1, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 10, 12
Ngezinga le-10% lokubaluleka sifuna ukuvavanya ingcamango yokuba idatha yesampuli ivela kubemi abanomlinganiselo omkhulu kunama-5. Ngaphezulu ngokusemthethweni, sinemiba elandelayo:
H 0 : μ = 5
H a : μ> 5
Sisebenzisa iZ.TEST kwi-Excel ukufumana ixabiso le-p kulo vavanyo lweengcinga.
Faka idatha kwikholomu kwi-Excel. Masithi oku kuvela kwiseli A1 ukuya ku-A9
Kwesinye iseli faka = Z.TEST (A1: A9,5,3)
Ekubeni ixabiso lethu le-p lingaphezulu kwe-10%, asiyikukhanyela i-hypothesis.
Umsebenzi we-Z.TEST ungasetyenziselwa iimvavanyo ezincinci eziphantsi kunye neemvavanyo ezimbini ze-tailed ngokunjalo. Nangona kunjalo isiphumo asikho nje ngokuzenzekelayo njengoko kwakunjalo kulo mzekelo.
Nceda khangela apha ngezinye izibonelo zokusebenzisa lo msebenzi.
Ukwenza i-NORM.DIST kunye ne-NORM.S.DIST kwi-Excel
IGlosari yeMathematika: iMathematika imigomo kunye neenkcazo
I-Chevy Silverado Ukugqitywa kwexesha Ukucacisa
Kutheni i-Termites ilandela imizila ye-ink?
Indlela yokuzalwa yeNumer
Yiyiphi iComputer Factor?
10 Amanqaku Ngeentlobo zabaMtshakazi nabantwana bomtshato
I-Transit 101: Ngaba ixabiso elithathayo ukuthatha isithuthi esidlangalaleni okanye i-Drive Drive?
Umlando okhawulezayo weMvelaphi ye-Adidas
'I-Kite Runner' yi-Khaled Hosseini - Incwadi yeeNcwadi zeNcwadi
Imithetho kunye neZono kwiSathana
IGAMA LENKULUNKULU Igama kunye Nemvelaphi
I-Faraday Inkcazo rhoqo
Ismodal Isoroku Yamamoto
Ngaba Uluhlu olutshanje olungcono kunomthi omude?
Ngaba AbakwaMormon Bangakwazi Ukutshata Ukuba Batshatile Ethempelini?
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiKholeji zoBugcisa boBugcisa
Imidiya kunye noNxibelelwano - IsiGrazil IsiGama
10 Argon Facts - Ar okanye i-Atomic Number 18
Izibhenca kwi-Space kwi-Skylab 3